Apple Manambara tantera-drano iPhone 7 - News Fitsipika
Apple Manambara tantera-drano iPhone 7
New loko, haingana processeur sy ny bateria intsony ny fiainana fa ny kely kokoa iPhone 7, ary fiaviana roa-fakan-tsary eo amin'ny indray ho an'ny iPhone 7 Plus - fa araka ny faminanian'ireo, ny headphone Jack tsy ao intsony
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Apple mampiseho tantera-drano iPhone 7 miaraka amin'ny fakan-tsary vaovao … ary tsy misy headphone Jack” nosoratan'i Samuel Gibbs, fa theguardian.com ny alakamisy 8 Septambra 2016 07.04 UTC
Apple no misarom-boaly ny iPhone 7 ary 7 Bebe Kokoa, ny taranaka manaraka finday avo lenta, izay manana fijery mitovy aluminium fa ankehitriny kosa tantera-drano amin'ny insides vaovao, vaovao an-trano mora tsindry-bokotra, lafiny roa-fakan-tsary vaovao lafin-javatra ary tsy headphone faladiany.
Apple ny ambony filoha lefitry-barotra maneran-tany, Phil Schiller, naka ny dingana ao amin'ny Bill Graham Civic Auditorium any San Francisco mba hanambara ny finday avo lenta, ny voalohany mba hanomboka amin'ny orinasa farany iOS 10 rindrambaiko ho an'ny iPhone sy ny iPad amin'ny fanatsarana ny fampahatsiahivana sy ny hafatra endri-javatra.
Ny fiovana lehibe indrindra ho an'ny iPhone vaovao, na izany aza, dia ny fanesorana ny an'izao tontolo izao 3.5mm headphone Jack, izay nampiasaina mba ho nanapaka tany ambany indrindra ny finday avo lenta sy mahazatra ny ankamaroan'ny endrika feo mpamokatra elektronika. Tsy, Apple manantena ireo mpampiasa no hanaiky ny helatra seranan-tsambo, izay matetika ampiasaina ho hery sy ny rakitra famindrana, for teny, na Wireless écouteur toy ny atao amin'ny Apple ny mitempo écouteur marika.
Tselatra connector écouteur, ary ny helatra-to-analogue adaptatera ho tafiditra amin'ny iPhone vaovao.
Schiller hoy: "Apple EarPods no malaza indrindra eo amin'izao tontolo izao écouteur. Ankehitriny isika hifindra azy ireo helatra. Nahoana? Satria manome Hafanàm-po an-peo, fahefana, sy ny maro hafa fotsiny tombontsoa izay tsy azo atao noho ny analogue fifandraisana.
"Ny analogue headphone Jack efa niaraka taminay nandritra ny ela be. Fa ny antony hifindra eo dia herim-po. Ny herim-po hifindra eo ary manao zava-baovao izay betters isika rehetra. "
Apple vaovao in-tsofina Wireless earphones, AirPods. Sary: Stephen Lam / Getty Images
Apple ihany koa dia nanambara ny vaovao napetraka ny ny EarPod in-tsofina hitsimoka, tamin'ity indray mitoraka ity raha tsy misy ny telegrama, antsoina hoe AirPods, izay manantena, dia hanamaivana ny tetezamita avy amin'ny écouteur seranan-tsambo.
Bluetooth écouteur dia be misy amin'ny iray isan-karazany ny vidin-javatra sy ny fahaiza-manao, ary manana Lasa malaza ao anatin'ny roa taona, fa tena Wireless in-tsofina hitsimoka efa niady mafy mba handresy ny teknolojia ny faneren'ny fiainana sy ny bateria fohy malemy fifandraisana. Maro modely vaovao navoaka tamin'ity taona ity avy amin'ny orinasa toy ny Motorola, Bragi sy Samsung manantena ny hamahana ireo olana.
Phil Schiller, ambony filoha lefitry-barotra maneran-tany, nanao hoe:: "Hatramin'izao tsy nisy naka ny zava-tsarotra ny manamboatra ny zavatra izay sarotra ny hanao ao amin'ny Wireless traikefa mba hahafahantsika hifaly mandritra izany fotoana rehetra. Ka izay no isika manao ny Apple AirPods. "
AirPods hitentina $170 ary ho misy amin'ny faran'ny volana Oktobra. Apple ny headphone marika mitempo ihany koa hanafaka Wireless vaovao modely.
Haingana A10 Fusion Chip
Toy ny teo aloha rehetra iPhone fanavaozam-baovao, ny iPhone 7 ary 7 Plus manana haingana, matanjaka kokoa processors - ny Apple A10 Fusion fanoloana ny A9 tamin'ny taon-dasa ny iPhone 6S - amin'ny any ivelany ny vaovao kolaka finday avo lenta nahita fiovana amin'ny famolavolana.
Ny vaovao QUAD-fototra A10 Fusion processeur dia hanana 120 fotoana ny fanatanterahana ny tany am-boalohany sy ny Apple iPhone milaza izany koa hanitatra bateria kokoa ny fiainana amin'ny alalan'ny hery efficiencies.
Apple milaza fa ny iPhone 7 hamonjy, eo ho eo, roa ora ny bateria fiainana noho ny iPhone 6S.
The iPhone 7 tonga ao amin'ny vaovao gloss loko mainty sy efa nafeniny ny teo aloha hita Antenna-dalana, ny indray manamarika ny roa kely sary tweaks ny vaovao ny alohany finday. Ny iPhone vaovao ihany koa ankehitriny, tantera-drano ny IP67 fitsipika, nitondra azy ho ao an-dalana, miaraka amin'ny mpifanandrina amin'ny Samsung sy ny olon-kafa.
Ny an-trano ihany koa ny bokotra tweaked hampiasa toy izany koa tsindry-saro-pady ny teknolojia ho toy ny MacBook Apple trackpads sy ny 3D mikasika lamba eo amin'ny iPhone 6S, izay simulate hetsika mampiasa kely tadin fahatsapana rehefa tsy nanery tena mahakivy. Ny vaovao dia hamela bebe kokoa bokotra fihetsika fanaraha-maso sy afaka hanamboatra ny lalana ny bokotra mba ho esorina tanteraka amin'ny tatỳ aoriana dikan-ny finday avo lenta.
ho an'ny maro, ny an-trano ny bokotra no iray amin'ireo malemy hevitra ny iPhone, mitaky fanoloana izay efa hita fa mamitaka noho ny tondro sensor sy azo antoka Chip miafina ambany.
Plus lafiny roa-fakan-tsary
The iPhone 7 Plus ho roa fakan-tsary eo amin'ny indray. Sary: Monica Davey / EPA
The iPhone 7 koa manana fanatsarana rafitra fakan-tsary mba haharaka mpifanandrina. Ny iPhone ampiasaina mba manana ny tsara indrindra fakan-tsary eo amin'ny raharaham-barotra, fa ny iPhone 6S niatrika fifaninanana henjana avy tsy Samsung, fa HTC, LG sy ho fananganana orinasa Shinoa kintana Huawei.
Ny fakan-tsary dia manana haingana ankehitriny, lehibe kokoa 12-megapixel sensor, ny haingana kokoa f1.8 family ho ambany-mazava kokoa ny sary sy feo marina-tselatra. Rehetra dikan 'ny iPhone dia izao no Optical sary stabilization, tsy ny lehibe kokoa Plus modely.
Ny vaovao farany dia hahita ny lafiny roa-fakan-tsary vaovao manify ny indray ny lehibe kokoa iPhone 7 Bebe Kokoa – iray 12-megapixel Telephoto family sy iray 12-megapixel eran-zoro family – mitovy amin'ny an'ireo manify ny LG ny H5. Samy Huawei sy ny LG no namoaka finday avo lenta tato anatin'ny roa taona fampiasana fakan-tsary ao ambadiky ny ambaratonga samihafa ny fahombiazana.
Apple mamela Optical Zoom izao ho amin'ny 2x amin'ny roa Mitovy amin'ilay family mbola, mampiasa nomerika Zoom mba mihoatra noho. A maimaim-poana ihany koa vaovao mamela ireo mpampiasa mba hampanjavozavo ny fototra mampiasa roa Mitovy amin'ilay family mbola hitsara halavirana sy mamorona bokeh vokany, toy izany koa ny rindrambaiko vokatry vokarin'ny mpifanandrina.
Schiller hoy: "Tamin'ny DSLR dia afaka mifindra family singa hanao zoom amin'ny lehibe family. Fa amin'ny an-tariby tsy afaka manao izany. Noho izany dia mampiasa roa fakan-tsary sy ny Mitovy amin'ilay family mbola roa mba hanao toy izany koa. Ny toetra ny Zoom, na dia amin'ny rindrambaiko Zoom, be dia be ny tsara noho talohan'ny nanapa-kevitra ny manosika azy ho 10x. "
The iPhone 7 dia ho hita ao amin'ny loko efatra manomboka amin'ny 16 Septambra amin'ny $649 fa 32GB ny fitehirizana – Nitombo tamin'ny taon-dasa ny 16GB base fitehirizana amin'ny 128GB sy 256GB safidy. The iPhone 7 Plus dia lany amin'ny $769, indray amin'ny 32GB ny fitehirizana. Ny fiaramanidina-mainty modely ho 128GB sy 256GB variants ihany.
Tamin'ny taon-dasa ny iPhone 6S, 6S Plus sy ny iPhone SE ho mbola misy, izao manomboka amin'ny 32GB ny fitehirizana. Ny iPhone fandaharana fanavaozana koa ho hita ao amin'ny UK.
mifidy, tock, tock?
Mandrak'izao, Apple ny finday avo lenta no nanana feno redesign isaky ny roa taona araka ny nentim-paharazana famotsorana fandaharam-potoana, amin'ny fanatsarana processors sy ny endri-javatra vaovao vitsivitsy isan-taona hafa mahatonga ny "tock" ao amin'ny tsingerin'ny. Intel sy ny hafa ihany koa ny mampiasa ny mifidy, tock vokatra tsingerin'ny, fomba nentim-paharazana nohatsaraina bateria maneho ny fiainana ny mifidy.
The iPhone 6 dia ny mifidy, izay midika hoe ny iPhone 6S no tock. Ny iPhone 7 ny fampiasana ny orinasa mitovy famolavolana ny teo aloha miampy iPhones loko vaovao bucks ny fironana, midika ny iPhone vaovao azo heverina ho toy ny faharoa-toy izany tock. Na kokoa fepetra arahana sy ny endri-javatra vaovao vitsivitsy, ny sasany izay ho avy amin'ny 2015 ny iPhone 6S alalan'ny rindrambaiko fanavaozam-baovao, dia ho ampy mba hanohy ny Woo mpanjifa Mbola ho hita.
"Ny fanamby lehibe indrindra Apple dia ny fomba fitantanana ny lehibe hametraka base - ny lehibe indrindra ao amin'ny orinasa - ka handresy lahatra azy ireo mba hisolo ny smartphone sy ny handany fotoana bebe kokoa amin'ny asa sy ao amin'ny orinasa ny tontolo iainana,"Hoy Francisco JERONIMO IDC ny talen'ny fikarohana ho an'ny finday Eoropa fitaovana. "Raha miha-manakaiky 80-85% finday avo lenta fidirana, fa tsy misy intsony ny olona mividy ny voalohany hisarihana mpanjifa finday avo lenta, fa avy amin'ny mpifanandrina. "
Ao amin'ny UK, Apple no miady ny ady amin'ny lehiben'ny mpifanandrina Samsung ny 20% ny mpampiasa izay mifamadika fandidiana eo amin'ny rafitra. Izany baolina switchers indrindra amin'ny iPhone 6, izay nampiditra efijery vaovao habe, fa ankehitriny tsy maintsy miezaka handresy lahatra ireo mpampiasa mba hanatsarana avy teo aloha iPhones.
iPhone 5S be Haingana Noho ny iPhone 5
Lehilahy maka ho amin'ny rahona amin'ny izao tontolo izao-pentacontaka voalohany ...
Stephen Hawking, mpahay siansa lamosiny Nanampy famonoan-tena
20434	6 Peter	Sep 10, 2016	Paoma, Article, IOS, iPhone, iPhone 7, Finday, News, Samuel Gibbs, Smartphone, Teknolojia, fifandraisandavitra
← Samsung Galaxy Note 7 Review MacOS Sierra: Top dimy Zavatra Tsara ho Fantatrao Momba ny New Apple Mac Software →
Smart Mpandahateny: Ny mpividy ny Guide
Apple HomePod Farany Available ny Buy